musha Oceania Keith Urban Childhood Nyaya yezve Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeMutambi Muimbi anozivikanwa kwazvo nezita rekuti ""Suburban“. Yedu Keith Urban Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvazvo inzwi rake rine mweya uye rinoparadzanisa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Keith Urban's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Keith Urban Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga, Keith Lionel Urban akazvarwa pazuva re26th raGumiguru 1967 muWhangarei, New Zealand. Keith aive mwana wechipiri akaberekwa naamai vake Marienne Urban (anoshanda muchitoro) uye kuna baba vake Robert "Bob" Urban (zvakare anoshanda muchitoro).
Young Keith uyo wechiChirungu, ChiGermany, Scottish uye Ireland ane makore maviri chete apo mhuri yake yakatamira kuAustralia ichigara kune rimwe guta rainzi Caboolture, muQueensland.
Yaiva paCaboolture apo Keith akakura pamwe nemukoma wake mukuru Shane pakati pemitambo yevabereki kubva kuvabereki vake. Baba vaKeet Bob vakanga vari mudhakwa apo baba vake baba vake, Karl Urban vakanga vazivikanwa nomudzidzisi piano. Kunyanya kukanganiswa ndechokuti vabereki vaKe Keith vaiva mavheti makuru emimhanzi yenyika !.
Mukomana mudiki 'akachengetedza zvikamu' mukuda kwevabereki vake pavakamupa ukulele pazera remakore 4. Keith akagona matambo echiridzwa uye akafambira mberi achitamba gitare baba vake pavakamupa mudzidzisi wechidzidzo, Sue McCarthy.
Yaiva nyaya chete makore asati aita tarenda yake chaiyo yevanhu nekuita nhepfenyuro paainyorera kufambira mberi kwezvidzidzo.
Keith Urban Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Keith akadzidziswa Sir Edmund Hillary College muOtara, kuSouth Auckland. Paaikwira kumusoro kwedzidzo, Keith zvaaifarira mumimhanzi akamuona akanyorera kushanda kwake kwekutanga mu1974 neWestfield Super Juniors, boka rakasikwa kuratidza vechidiki vane ruzivo.
Kwakazotevera kuyedza kwekutanga kwemimhanzi kwakaona mudiki achikunda nyika mimhanzi tarenda anoratidza uye akasimbisa kuda kwake mimhanzi muhujaya hwake. Panguva iyo Keith aive nemakore gumi nemana, aive achiita mumakirabhu uye aive nemagig akawanda vabereki vake vaifara kumutyaira. Akapedzwa nerudo rwaingokura zvakanyanya, Keith akasiya chikoro mushure megiredhi regumi kuti ape kuda kwake chiyero chizere chekutaura.
Keith Urban Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Road To Fame
Mugwagwa waKeith wekurumbira wakanga usina kufanana nebasa rake rakavakwa, rakazara nematambudziko uye zvipingamupinyi. Akatanga zvakanaka mu 1998 nekuumba bhenji uye akabudisa zita rake rekutanga dhidhi album 'Keith Urban' mu1991. Zvisinei, mukurumbira yaiva izwi risati ramboita sechinhu chakaziva naye.
Muna 1992, tariro yaKeith yakatamira kuNashville, kuUnited States kunotsvaka zvakakurumbira mukurumbira asi paakauya, akazviwana achirwisana kwemakore anotevera 7. Akakosha pakati pekugadzirisa matambudziko aakaona kwaiva kukanganisa kwechikwata chemimhanzi chaakaumba chinonzi 'The Ranch' uyewo ukama hwehukama hwakamuita kuti ave nerudo rwekodhaine mu1997.
Akazvidira akazviisa iye pachake nokuda kwe rehab mu 1988 kusvika Cumberland Heights Nashville Drug uye Alcohol Treatment Center kwaakange aporeswa. Mwedzi yakati gare gare, Keith akapa kupa zivo kune chii chakaita kuti ave nechido chekurega kushandisa zvinodhaka.
"Iwe unozviita kwenguva refu uye iwe unoora mwoyo, zvino iwe unoshungurudzwa, zvino iwe unotya iwe uchafa. Ndinoziva kuti zvinonzwika zvakashata, asi ndakazosvika pakasvika pandakanga ndichiziva kuti handizvo ini, uye ndakangosiya. "
Keith Urban Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Nguva pfupi pashure pokunge Keith akazorora kubva pamishonga yekushandisa zvinodhaka iye akanzwa kufarirwa kugamuchira mukurumbira kuburikidza nekubudiswa kwezvake zita rake rinonzi American debut album 'Keith Urban' mu1999. Iyo album yakange iine zvinyorwa zvakadai se "Asi nokuda kweChirungu chaMwari," yakatarwa nhamba ye17 muchato cheTest Country Albums uye yakagadziridzwa negoridhe. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Keith Urban Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Kusiyana nemafungiro anoratidza kuti Keith ndiye gayari, kufambidzana kwake nhoroondo uye hukama hwepano hwemhuri hunoratidza zvimwe. Kutanga, muimbi aiva neukama hwake hwekutanga neyeimwe nyanzvi yezvokurapa, Laura Sigler pakati pemakore 1992 kusvika 2002. Idzo dzaive dziripo uye dzisina hukama hweukama vasati vatora danho pakuzvipira nekuita basa mu 2001. Zvisinei, vakaputsa gore gare gare.
Kufamba paKeith dated supermodel Niki Taylor kwemakore 3 vasati vaparadzana mu2005.
Muimbi uyu akazoita kuti afambidzane nhoroondo apo akasangana nemudzimai wake kuva Nicole Kidman pachiitiko munaJanuary 2006.
Kusangana kwavo kwekutanga kwakamutsa kudanana kwakagara kwemwedzi vasati varoora mwedzi mishoma gare gare musi wa25 Chikumi muSydney, Australia.
Imba Yadzo inokomborerwa nevanasikana vaviri, Sunday Rose Kidman Urban (akazvarwa muna July 7, 2008) uye Kutenda Margaret Kidman Urban (akaberekwa muna December 28th 2010).
Keith naNicole vachiri kuramba vakaroorana pasinei nekukwirira uye kukanganisa muukama hwavo. Izvo zvinokwana kuziva kuti iHollywood ndeye simba rinogara rinowanzobatana.
Keith Urban Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Keith akaberekerwa mumhuri yeChina tinokuudzai nezvemhuri yake.
Pamusoro paKee's Mother: Amai vaKeith Marieene ndomumwe wevamai vashoma vanogovana zvimiro zvakafanana nevakomana vavo vakuru. Marieene aive mudzimai anotsigira uyo akabatsira murume wake nekuchengetedza zvitoro pamwe naamai vane hanya vaisimudzira zvido zvevanakomana vavo.
Pamusoro paKeith Baba: Baba vaKeith, Robert aive chidhakwa, kunyangwe yaive mhando isingawanzoitika iyo yakarera vana vavo nenzira inehunhu zvisinei nehunhu hwake. Robert aive kufemerwa shure kwekubudirira kwebasa raKeith. Muchokwadi, Keith akatsvaga zvakanyanya mukurumbira mumimhanzi yenyika nekuti yaive kuravira kwababa vake. Kusvika parufu rwake mu2015 nekuda kwegomarara, Robert aive baba vane hanya nevanakomana vake uye mudiwa akatendeka kumukadzi wake.
Pamusoro paKeith's Brother: Shane ave ari pedyo zvikuru nehanzvadzi yake Keith, kubva pakuita basa rehama huru pavakakura paCaboolture kuti ave mukoma wake mukomana akanaka. Vaiita sevasinganzwisisiki. Zvisinei, hukama hwakaguma kuva makore mushure mekunge Keith akaroorana sezvaakangoti akasiya Shane uyo zvino anosiya hupenyu hwakanaka muQueensland Australia.
NezveKeith's Relatives: Vanasekuru vababa vaKeith Urban ndiKarl Urban (1913-1992) naGladys Rose Cooksley (1918-2004). Kune rimwe divi, vanasekuru navanamai vake ndiCharles Bruce McKinnon (1910-1988) naFlorora Masters (1914-1998).
Keith Urban Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Hwehupenyu Hwechokwadi
Keith ndiye munyori munyoro uye akabudirira uyo anotenda mukutsvaga kubva kwaakasiya pane zvakajeka mukusangana kwake kubva muupenyu hwezvinetso kusanganisira kushandisa zvinodhaka. Anotora hutoro hwehupenyu uye haamboregi kugamuchira kupera kwake. Keith pakati pezvimwe zvinhu anoda kunze uye nekugara neshamwari nevadikanwa vake.
Keith Urban Childhood Nyaya Ina Untold Biography Facts: Unoziva here?
Keith anopfuura 100 guitars. Hungu, ane zvishoma 2 maoko uye minwe 10.
Akambozviratidza mune yake sutu sutu seye Playgirl magazine cover modhi.
Keith anovimbisa vateveri vake zvakanyanya uye aiwanzosarudza vashoma pamusana pamwe naye kuti atambe gitare rinotungamirira kana kuimba mutungamiri. Ndeipi ngozi. Zvakanaka, inogadzira chiitiko chinonakidza pavanonunura maererano nezvinodiwa.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Keith Urban Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!